You are here: Home / Advertise With Us / Website Solution
Website Solution. ( Website တည်ဆောက်ခြင်း )
Package Name: Super Profile Site
Myanmar Super Pages မှ လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ website များကို တည်ဆောက်ပေးနေပါသည်။
1. Your Own Domain ( ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း )
2. Embed google map on own web site ( လုပ်ငန်းတည်နေရာ မြေပုံ google map ဖြင့်ဖော်ပြခြင်း )
3. Contact Address ( လုပ်ငန်း လိပ်စာဖော်ပြပေးခြင်း )
4. Social (link or embedding) ( ဆိုရှယ်မီဒီယာများကို link သို့ code ထည့်ပေးခြင်း )
5. Menu Item ( ထည့်သွင်းနိုင်သော Menu Link အရေအတွက် )
6. Photo showcase ( ဓာတ်ပုံများ စုစည်းပြသခြင်း )
7. Google Search engine submission ( google search engine သို့ ထည့်သွင်းပေးရန် submit လုပ်ပေးခြင်း )
8. Responsive design/Mobile Compitable ( ဖုန်းများ၊ tablet များ၊ ကွန်ပျူတာများအတွက် အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးခြင်း )
9. Server Space ( ထည့်သွင်းနိုင်သော data ပမာဏ )
10. Bandwidth limit ( သတ်မှတ်ထားသော bandwidth ပမာဏ )
11. Number of templates ( ရွေးချယ်နိုင်သော website design များ )
12. Frequent data update page/per year ( တစ်နှစ်လျှင်ပြင်ဆင်မှု အကြိမ်ရေ)
ပြည်ပနဲ့ ဆက်သွယ်လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အတွက်ကတော့ မရှိမဖြစ်ပါ။ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေ၊ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက် အရမ်းအကျိုးရှိပါတယ်။ အတိုဆုံးပြောရရင် သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ တစ်နှစ်ကြော်ငြာ အသုံးစရိတ်ဟာ ၁၀ သိန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းအရွယ်အစားဆိုရင် တော့ သေချာပါတယ် ဝဗ်ဆိုက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေပါပြီ။
Website လုပ်ဖို့ ဘာတွေလိုလဲ။
လူကြီးမင်းတို့ ရောင်းတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း ၊ ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းတွေကို ရေးပေးထားဖို့လိုပါမယ်။ ပြီးတော့ website မှာ ထည့်မဲ့ စာတွေ၊ ပုံတွေ ရှိရင်ရပါပြီ။ လက်ကမ်းကြော်ငြာ brochure လုပ်ထားတာရှိရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
*** ADDITIONAL SERVICES ( လိုအပ်ပါက ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်သော service များ )
Data update ( data များပြင်ဆင်ခြင်း )
Google GSuite Email ( google လုပ်ငန်းသုံး professional ကို ဈေးသက်သာစွာဖြင့် ဝယ်ယူပေးခြင်း )
Embed Youtube video clip ( Youtube တွင်ထည့်သွင်းထားသော movie ကို website တွင်ထည့်သွင်းပေးခြင်း )